Iimpawu, ibhayoloji kunye nokhathalelo lweCaridina japonica | Ngeentlanzi
Namhlanje asizukuthetha ngentlanzi uqobo, kodwa siza kuthetha ngeentlobo ezixabisekileyo nezaziwayo. Imalunga ne- UCaridina japonica. Luhlobo oluthile lwamanzi amdaka afunwa kakhulu kwaye adume ngazo zombini ixabiso lawo lokuhombisa kunye nokuba luncedo ekulawuleni i-algae e-filament. Yeyosapho lakwa-Atyidae kwaye inemvelaphi yaseJapan.
Ngaba ungathanda ukwazi zonke iimpawu, indlela yokuphila kunye nezizathu zokuba kutheni kunjalo? Kufuneka uqhubeke ufunda 🙂
2 Iimfuno kunye nokusingqongileyo
4 Ukuzaliswa kweCaridina japonica
Olu hlobo lwamanzi amdaka lufumaneka kumanzi amachibi kunye nasemadamini. Banokuhlala kwiindawo ezimnandi, kodwa kananjalo nyamezela ityuwa ephezulu. Indawo yokuhlala yendalo ikummandla waseYamato, nangona abanye abantu befumaneka kwiindawo zaseCora naseTaiwan.
Ngenxa yodumo lwayo olukhulu kwipaki yamanzi yaseTakashi Amano kwiipropathi zayo zokuhombisa umhlaba, ukusetyenziswa kwayo kwiindawo ezinamanzi kuye kwasasazeka. Yaziwa njenge Amano shrimp okanye prawn.
Ukuthetha nge-morphology yayo, sinokuthi ngumzimba wayo iyafana nezinye iintlanzi Zombini iilwandle kunye namanzi amatsha. Ine-cephalothorax enomtya omhlophe ophela emsileni. Eli lelona candelo libalaseleyo lepron. Kwinxalenye yentloko sifumana onke amalungu abalulekileyo ekusindeni kwesilwanyana. Kule ndawo sifumana izibini zemilenze esinokuyisebenzisa xa sihamba.
Amathambo ayafumana igama le-exoskeleton kwaye ngaphantsi kwayo sifumanisa isisu kunye nezihlunu zayo. Kule ndawo apho anehlobo lesiketi alisebenzisayo xa edada. Umsila wayo unamachaphaza amnyama amhlophe ahlukileyo kwaye enziwe ngePleopods. Ezi zinto zisetyenziselwa ukutshintsha indlela ngequbuliso xa uqubha kwaye uleqwa sisilwanyana.
La UCaridina japonica uninzi lwayo lubonakala ngokucacileyo. Umbala wayo uyakwazi ukwahluka ngenxa yohlobo lokutya. Umahluko phakathi kwamadoda nabasetyhini ulele kwiindawo ezihombisayo. Ngelixa abantu ababhinqileyo benamabala abo ixesha elide, abesilisa banwenwe ngaphandle komyalelo obonakalayo.
Iimfuno kunye nokusingqongileyo
Ukuba sithetha ngobungakanani bayo, sinokuthi iyafikelela ubukhulu obumalunga neesentimitha ezi-6 kwabasetyhini kunye ne-3 cm kuphela emadodeni. Oku kwahlula kwezinye iintlobo zeCaridina. Umzekelo, kwiindidi UCaridina cantonensis, iisampulu zifikelela kubukhulu obufikelela kwi-9 cm. Imvelaphi yezi zilwanyana ivela e-China kwaye amabala azo aqhelekileyo mancinci.
Enye yezinto ekufuneka ithathelwe ingqalelo ukugcina ifayile ye- UCaridina japonica linyathelo labo lokondla kwi-aquarium. Akufanele anikwe ukutya okuninzi ngaxeshanye, kunokuba, kufuneka yenziwe kancinci. Ukongeza, kubaluleke kakhulu ukubondla ngokulayita ukucutha uxinzelelo kwezi zilwanyana.
Azisoloko zizilwanyana ezinengcwangu ukuze zigcinwe ngokwamaqela amancinci. Ngale ndlela siza kubenza baphulukane neentloni zabo zendalo. Ukuba sibaxinzelela kakhulu kwaye singabavumeli boyise iintloni zabo, ngekhe sikwazi ukubabona. Zizilwanyana ezisebenza ebusuku, nangona ukukhanya kungomelele kakhulu, ziya kusebenza nasemini.
Isongezelelo semifuno sidlala indima ephambili ekudleni kwabo. Lulwelwe olune-filamentous algae hayi oluqhelekileyo lumnyama okanye ibrashi algae. Ihlala inyamezelana nezinye izityalo ukuba ayinako ukutya. Baye bafunyanwa besondla iRiccia. Ukuba balambile bangatya nantoni na abanokuyifumana. Kuye kwabonwa kudla izilwanyana ezifileyo kunye nemibungu yeentlanzi.
Kwii-aquariums, ukondla kwabo kufuneka kuxhomekeke ekusebenzeni kwabo njengomlawuli we-filamentous algae.
Enye yezona zinto zibalulekileyo ekufuneka sizithathele ingqalelo ukuba sithatha isigqibo malunga nale ntlobo kukubaluleka kokukhetha amaqabane amahle e-aquarium. Ezi prawnini azingabo abahlobo abalungileyo beentlanzi ezinkulu ezinobuntu obundlongondlongo. Ukuba sizibeka kunye nazo, aziyi kuthandabuza ukuzitya njengokutya.
Ukuzaliswa kwakhona kwe UCaridina japonica
Ngokubhekisele ekuvelisweni kwayo, isebenza ngokugqibeleleyo ekuthinjweni. Kuya kufuneka silumke kakhulu ukugcina umntu obhinqileyo kwenye i-aquarium ngaphambi kokuba amaqanda aqandusele. Ngaphandle koko, okuseleyo kweentlanzi etankini kuya kuba nokutya okune-protein. Bafikelela ekuvuthweni ngokwesondo emva kweenyanga ezintlanu zobomi. Kuyenzeka ukuba ufumanise ukuba owasetyhini ukhulelwe ukuba isisu sakhe siba mnyama. Lo ngumqondiso osixelela ukuba amaqanda aqala ukwenza.
Kuxhomekeke kubushushu bamanzi, ukuqanduselwa Amaqanda athatha umndilili weeveki ezi-4 ukuya kwezi-6. I-prawns yabantu abadala inokuhlala ngokugqibeleleyo emanzini amatsha. Nangona kunjalo, imibungu ifuna amanzi olwandle kwasekuqaleni kuphuhliso lwayo. Elona nani lililo leetyuwa ziigram ezingama-30 kwilitha nganye yamanzi. Xa befikelela kubungakanani obungaphezulu kweemilimitha ezintlanu, kufuneka bazilungiselele ukuhambisa emanzini amatsha. Ukwenza oku, amanzi agalelwa kancinci kancinci ukunciphisa ityuwa. Izibungu akufuneki zisuswe ngesiquphe zisuka kwityuwa ziye emanzini amatsha.
Ukutyiswa kwe Caridina japonica hatchlings kusekwe kwi plankton ephilayo okanye yentengiso. Banokutyiswa i-brine shrimp okanye i-cypclop eeze nauplii. Xa sele bekhulile ngaphezulu kweesentimitha eziyi-1,5 zinokufakwa kwi-aquarium ngokubanzi kunye namaqabane abo. Ukuba kubalulekile ukuba ezinye iintlanzi azizinkulu okanye ziya kugqiba ukuzitya.
Ixesha labo lokuphila lisondele kwiminyaka emi-3 nangona ingahlali idlula ezimbini ekuthinjweni.
Njengoko ubona, uCaridina japonica yiprawn efunwa kakhulu ngabo bonke abathanda i-aquariums. Ayisiyiyo kuphela ngenxa yolawulo lwayo lwe-algae, kodwa ngenxa yokuba yongeza ubuhle obahlukileyo kwi-aquarium apho ikhoyo. Kwaye wena, ukhe wacinga ukuba unayo enye yezi?
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ngeentlanzi » Amanzi akwariyam akwariyam » UCaridina japonica